राजा कि राष्ट्रपति छान्न लगाउँदा अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्काले दिइन् सबैलाई गर्व महसुस हुने जवाफ - खबर प्रवाह::Khabarprawaha.com राजा कि राष्ट्रपति छान्न लगाउँदा अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्काले दिइन् सबैलाई गर्व महसुस हुने जवाफ - खबर प्रवाह
काठमाडौं । ‘अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्काले आफ्नो क्यारियरका बारेमा खुलेर नै कुरा गरेकी छिन् ।,
चर्चित रंग पत्रकार प्रकाश सुवेदीको दी प्रकाश सुवेदी शो मा आफ्नो फिल्मी क्यारियरका बारेमा र व्यक्तिगत जीवनका बारेमा खुलेर बोलेकी हुन् ।,
उनले पैसा कति कमाउँनुहुन्छ ? भनेर सोधिएको प्रश्नमा आफूलाई ‘चाहिनेजति कमाएको, खर्च जरुरी भए कसैसँग माग्नुनपर्ने’ अवस्थामा नआएको बताइन् । तपाई महंगी नायिकाको रुपमा नाम लिइन्छ ।,
भिडियो फिल्म खेलेको कति लिनुहुन्छ ? भन्दा धेरैले कामको कुरा गर्दा पहिले काम नभनि कति हो ? रेट भन्नुहुन्छ ! रेट भनेपछि काम भनौँ की भन्नुहुन्छ । म काम के हो ? भनेर सोधेर ओके गर्छु ।,
रेट भन्ने हैन, काम राम्रो होस् भन्ने लाग्छ, उनले भनेकी छिन् । शो मा तस्वीरबाट मान्छे चिन्ने खेलमा उनले सुरुमा देखाइएका दुई तस्वीरमा पूर्व सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटा चिनिन् तर पूर्व उद्योग मन्त्री महेश बस्नेत चिन्न सकिनन् ।, राजेन्द्र महतो र लालबाबु पण्डितको तस्वीरमा राजेन्द्रलाई तुच्छ भाषण गर्ने व्यक्ति भनिन् ।,
दुबैको नाम लिन सकिनन् । त्यसपछि पूर्व सेनापछि रुक्मांगत कटुवाल र पूर्व डिआईजी रमेश खरेल देखाइन्छ । उनले आर्मीका पूर्व चिफ कटुवाल चिनिहालिन् । उनले भनिन् म, आर्मी स्कुल पढेको हो । त्यो बेला उहाँ चिफ हुनुहुन्थ्यो । उहाँको श्रीमती उमा कटुवाल मेरो शिक्षिका हुनुहुन्थ्यो ।,
रमेश खरेललाई झट्ट, चिन्न सकिनन् । भोला रिजाल र रामवरण यादवको तस्वीर देखाउँदा डाक्टर रिजाल एकदम राम्रो मान्छे केही दिन अघि भेटेको भन्दै, सम्झिने कोसिस गरिन् । केही बेर सम्झिएर नाम लिइन् ।,
तर पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई ट्वाक्क भन्न सकिनन् । पछाडिको थर भनिदिँदा भने उनले रामवरण यादव पूर्व राष्ट्रपति भनेर भनिन् ।,
हर्क साम्पाङ्ग राई र बालेन्द्र साहको तस्वीर देखाएर पूरा नाम भन्न लगाउँदा उनले सजिलै भनिन् ।,
अभिनेत्रीहरु देखाउँदा केही झुक्किइन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजु देउवा राणा र सुजाता कोइराला देखाउँदा केही बेर सम्झिएर आरजुको नाम लिइन् । तर सुजाता चिन्न सकिन् ।,
एक प्रसंगमा “आफू लफडा गर्न नचाहाने मान्छे” भएको बताईन् । निर्मातासँग भएको लफडा बारे आफू नबोल्ने भनिन् ।,
केही “बरु बदनाम होस् गुमनाम हुन नपारोस्” भनेर व्यवहार गर्छन् । तर मलाई “बदनाम नहोस् बरु गुमनाम भए केही हुन्न” भन्ने लाग्छ उनले भनिन् ।,
धर्म संकट सेग्मेण्टमा उनले निर्देशक सुरज भूषाल की दिपेन्द्र के खनाल भन्दा खनाल रोजिन् । अभिनेता नाजीर हुसेन की गायक प्रकाश सपुत भन्दा गायक प्रकाश रोजिन् । दुबैसँग राम्रो रिलेशन छ, धर्म संकट पर्यो । तर प्रकाश सपुत मेहनती मान्छे भन्दै थप ब्याख्या गरिन् ।,
अभिनेता प्रदिप खड्का कि पल शाह भन्दा सिधै प्रदिप भनिन् । त्यसमा नै अनमोल केसी जोड्दापनि प्रदिप खड्का नै भनिन् । भुवन केसी की राजेश हमाल भनेर छान्न लगाउँदा कलाकारिताको हिसाबमा भूवन दाई भनिन् ।,
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा की रवि लामिछाने भन्दा उनले सजिलै रवि लामिछाने भनिदिइन् । तपाई चै कुन पार्टी हो भन्दा म स्वतन्त्र हो भन्ने जवाफ दिइन् ।,
अन्तिममा राजा की राष्ट्रपति भन्दा उनले देशको सवाल छ म यसमा अलिक राम्रो व्यख्या गरेर भन्छु भनिन् ।,
पहिले रोज्दा को ? भनेर प्रकाशले सोध्दा उनले यसमा राजा की राष्ट्रपति भन्नुहुन्छ भने राजा रोज्छु । राजतन्त्र की प्रजातन्त्र भन्ने सवाल हो भने म प्रजातन्त्र रोज्छु भनिन् । उनले समग्रमा निक्कै ट्यालेण्ट प्रस्तुती दिइन् ।,